Toe-karena nivarotra sarimihetsika PE fotsy fotsy China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Mivarotra sarimihetsika PE White White St Stretch,Sarimihetsika fanatanjahantena PE PE fotsy,Film sarimihetsika fotsy PE St
Home > Products > Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika miloko > Toe-karena nivarotra sarimihetsika PE fotsy fotsy
Sarimihetsika fotsy PE (Sarimihetsika miloko miloko, sarimihetsika mamelana miloko, sarimihetsika mitsangatsangana miloko mavokely) dia manana anti-miolakolaka amin'ny famonoana ranomaso dia tsara, matevina matevina, fampisehoana tsara ary vidiny mora indrindra.Izany indrindra dia ampiasaina amin'ny borosy sy ny kitapo tariby ihany koa dia azo atao hoe assemlesd. rano, vovoka sy ny sisa . Izy io dia azo ampiasaina amin'ny indostria na sehatra hafa.
Izahay dia manokana amin'ny Film Stretch, Trafo Tape ary PP Fandresena efa ho 20 taona.YALAN Packing nanomboka ny fampanantenana hitondra ny fonosana kalitaon'ireo mpanjifantsika sarobidy amin'ny vidin'ny fifaninanana miaraka amin'ny serivisy. Ireo fitsipika tsotra ireo dia nandefa orinasa iray izay miezaka hatrany ny hitondra ny mpanjifa ny safidy tsara indrindra amin'ny fanontaniany sy ny filàna fonosany.
manome kalitao sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika.
Q: Ahoana ny fomba hifehezan'ny orinasa ny kalitao?
F: Malalaka ny santionany?
Q: Azo atao pirinty amin'ny fonosana ve ny sary / marika manokana?
A: Eny, ny marika / marika manokana anao dia azo atao pirinty ao anaty fonosana amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana ara-dalàna anao, manohana ny serivisy OEM izahay araka ny takian'ny mpanjifantsika nandritra ny taona maro.
Q: Rahoviana aho no mahazo ny vidiny?
A: Matetika izahay dia afaka manonona ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fametrahanao ny fanontanianao raha maika ianao dia mahazo ilay vidiny. Azonao atao ny miantso anay na hilaza aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ka ho raisinao ho laharam-pahamehana.
F: Miankina mivantana amin'ny orinasa ve ianao?
A: Eny, manana ny orinasa manokana izahay. Ny vokatra rehetra dia miaraka amin'ny vidiny mifaninana sy kalitao tsara.
Q: Misy vidiny sy serivisy manokana ve ho anao varotra?
A: Eny, afaka manolotra vidiny sy serivisy tsara indrindra isika hihaona amin'ny mpanjifanay.ne hanao serivisy OEM.
Q: Inona avy no fomba azoko ampiasaina?
A: Ekenay ny T / T.Y afaka mandoa amin'ny fandefasana banky ary fametrahana 30%, 70% aorian'ny fahitana ny kopin'ny B / L
F: Hafiriana no atao ny famokarana sy fandefasana ny baiko?
A: Tao anatin'ny 10-15 andro aorian'ny fakana vola.
Sarimihetsika miloko pe maretaly
Film sarimihetsika fotsy PE St
Film mihetsika White Handle Stretch
Mivarotra sarimihetsika PE White White St Stretch Sarimihetsika fanatanjahantena PE PE fotsy Film sarimihetsika fotsy PE St Sarimihetsika White Stretch Film mihetsika White Handle Stretch Sarimihetsika Pallet Stretch Sarimihetsika Mini Stretch Film mihetsika Wire Stretch